Bill Gates na Microsoft ... akụkọ ifo, akụkọ ifo na ihe ndị ọzọ | Site na Linux
Bill Gates na Microsoft ... akụkọ ifo, akụkọ ifo na ndị ọzọ
jorgemanjarrezlerma | | GNU / Linux
Ke post site Elav wetara na tebụl maka mkparịta ụka nke ihe Linux kwesịrị ịdị na desktọọpụ. Ọfọn, site na edemede a nke Javier Smaldone anyị ga-anwa ịhụ otu n'ime ụlọ ọrụ ndị kachasị na ya na ihe kpatara ihe ịga nke ọma na ọdịda ya.
2 Mkpali maka edemede a:
3 Thsgha na eziokwu gbasara Bill Gates
4 Echiche ụgha na eziokwu gbasara Microsoft
5 Omume dubious nke Microsoft
6 Bill Gates, onye na-enyere ndị mmadụ aka
Okwu a maara nke ọma na-agbasa na ịntanetị malitere site na ịsị: «Microsoft abụghị azịza ya. Microsoft bu ajuju ...«. Ederede a gosipụtara ụfọdụ akụkụ anaghị ekpughekarị banyere Bill Gates, Microsoft, ngwaahịa ya, amụma ya na njikwa ya; na-achọ azịza nye ajụjụ a jụrụ.
Mkpali maka edemede a:
Ọtụtụ bụ akụkọ ndị a kọọrọ gburugburu Bill Gates na Microsoft. N'ime ọtụtụ n'ime ha, ndị ndị nkịtị maara na ndị mgbasa ozi mgbasa ozi na-agbasa, Gates gosipụtara dị ka onye maara ihe na kọmputa na ụlọ ọrụ ya, Microsoft, dị ka ọrụ maka ọganihu nke nghazi nke onwe (yana Internet) n'ime iri afọ ndị na-adịbeghị anya. Amabeghị ihe, na ọkwa ama ama banyere etu alaeze ukwu a si malite yana banyere nsonaazụ nke atụmatụ Microsoft mere na ụlọ ọrụ na teknụzụ ozi.
Na itntanetị ọ bụ ihe ịchọta ịchọta saịtị megide Microsoft na Bill Gates. Imirikiti na-elekwasị anya na nkatọ ha site n'echiche nke teknụzụ: na-atụ aka na njirimara dị ala nke ngwaahịa ha, na-ekpughe nnukwu adịghị ike ha na adịghị ike pụtara ìhè, na-atụnyere Windows na sistemụ arụmọrụ ndị ọzọ kwụsiri ike, rụọ ọrụ nke ọma ma nwee nchedo. Ndị ọzọ na-adọ aka na ntị maka ihe egwu dị na ọnọdụ ijikọ otu ọnụahịa nke Microsoft, yana amụma nke ụlọ ọrụ a na-eme iji gbasaa njikwa ya na mpaghara ndị ọzọ, karịa nghazi nke onwe.
Edemede a nwere ọtụtụ ebumnuche:
Gosiputa ufodu akuko nke bu akuko ifo, dika o siri bido Bill Gates na ihe ndi edere sitere na ya.
Kọwaa, na nkenke, ihe kpatara Microsoft jiri bụrụ ọkwa nke ya na ahịa ahịa kọmputa.
Gosi ihe egwu na ihe ojoo di na nghota nke Microsoft mere.
Thsgha na eziokwu gbasara Bill Gates
Ezigbo aha ya bụ William Henry Gates III na, dịka o yiri ka ọ na-egosi, sitere na ezinụlọ Seattle bara ọgaranya. Akụkọ a na-akọkarị banyere mmalite ya, jiri obere kọmputa ya na-egwu egwu, abụghị eziokwu. Gates guru akwukwo na ulo akwukwo kachasi oke (akwukwo ulo akwukwo di ihe kariri okpukpu ato na Mahadum Harvard) na, mgbe ya na ndi otu ndi enyi ya choro ibido igwu komputa, nne ya gbaziri ha PDP-10 (otu komputa eji ndị nyocha Stanford na MIT).
Nwa okorobịa ahụ ọhụụ nke gbanwere kọmputa
Echiche ụgha ọzọ a na-ahụkarị bụ na Gates kere asụsụ Basic. Enweghị ike ịpụtụ n'eziokwu ahụ. Ọ bụ John Kemeny na Thomas Kurtz ka e kere ntọala na 1964. Ihe Gates na Paul Allen mere bụ ụdị nke onye ntụgharị okwu kọmputa kọmputa nke Altair (ọfụma nke ụmụ akwụkwọ ọ bụla na-eme nke ọma na kọleji kọleji). Onye ntụgharị okwu a bụ naanị otu amaara ama nke Bill Gates dere. E mesịa, anyị ga-ahụ na ọtụtụ ihe ndị ọzọ e mepụtara na ọ bụghị ọrụ ya.
Echiche ụgha na eziokwu gbasara Microsoft
Bill Gates na Paul Allen hibere Microsoft. Na mbu onye ọ bụla n’ime ha nwere 50% nke ụlọ ọrụ ahụ, ọ bụ ezie na mgbe e mesịrị Gates ji nwayọọ nwayọọ na-achịkwa ya.
Nnukwu ihe ịga nke ọma nke Microsoft, na-achọpụta ọganiihu ya n'ọdịnihu, bụ ire MS-DOS na ụlọ ọrụ IBM. Emebeghi ma ọ bụ mepụta DOS na Microsoft, mana zụtara ya n'aka obere ụlọ ọrụ akpọrọ Seattle Computer. Onye edemede mbụ ya mere ya baptizim QDOS, mkpụmkpụ maka "Ngwaọrụ Nrụ Ọrụ Dị Njọ." Ihe ndi mmadu nile ghotara bu na odidi nke imeputa na ntinye nke MS-DOS na uzo mbu ya dara ogbenye nke uku. Mkpebi IBM iji tinye ya dị ka sistemụ arụmọrụ nke PC ya kpaliri ajụjụ nke asọmpi ya na ụlọ ọrụ Dijitalụ, nke nwere ike inye ngwaahịa dị oke mma, na n'ihi na IBM etinyeghị nnukwu mkpa na akara nke kọmputa nkeonwe. Ihe kacha dị egwu bụ na IBM azụtaghị MS-DOS mana o kpebiri ịkwụ ụgwọ Microsoft ụgwọ maka mkpụrụ akwụkwọ ọ bụla e rere na IBM-PC. Ihe a na-ekwukarị bụ na n'oge ahụ nne Gates, Mary Maxwell, bụ onye ntụzi nke ụlọ ọrụ United Way yana IBM CEO John Opel.
Anyị kwesịrị ịmalite site na ịkọwapụta, maka ndị kwenyere akụkọ mkparị ndị a na-akọ na mgbasa ozi ụfọdụ, na Microsoft echepụtaghị gburugburu eserese, ma ọ bụ windo, ma ọ bụ òké. Emebere ihe a site na ụlọ ọrụ Xerox na 1973 wee depụtaghachi ya na Apple na ngwụsị '70s na Microsoft na' 80s.
Windows mara ọkwa na November 10, 1983. The mbụ mbipute (1.0) pụtara na November 20, 1985, mgbe mbụ n'ezie usable mbipute (3.0) wepụtara na May 22, 1990. A dum sample nke "arụmọrụ" nke ụlọ ọrụ . Cheta na anyị na-ekwu maka ngwa ahịa ewepụtara ọrụ nke ndị Apple Macintosh webatara na 1984 (onye nkwụsi ike ya na ike ya kariri nke ukwuu). Naanị "omume ọma" nke Windows bụ na ọ na-agba ọsọ n'elu MS-DOS na kọmputa IBM-PC dakọtara.
Microsoft na Internetntanetị
Ọtụtụ kwenyela na Microsoft mepụtara web ma ọ bụ, nke ka njọ, na Intanet bụ echiche magburu onwe ya sitere n'aka Bill Gates.
Ntaneti, dika odi, laghachiri ihe dika 1986 (obu ezie na o sitere na ngwụcha 60s). The World Wide Web (ya na ndị nchọgharị mbụ) pụtara na 1991. Oge ụfọdụ ka nke ahụ gasịrị, Microsoft si na ụlọ ọrụ Spyglass zụta ihe nchọgharị a na-akpọ Mosaic, iji mechaa ghọọ Internet Explorer ugbu a. Explorerdị Internet Explorer mbụ nke pụtara na August 1995.
Eziokwu bụ na "ọhụụ" Gates ahụghị Intanet na-abịa. N’oge na-adịghị anya, yana mpụta nke Windows 95, ọ gbalịrị ịtọlite ​​otu netwọkụ (yana onwe ya) akpọrọ “Ntanetị Microsoft” (ọtụtụ ga-echeta obere akara ngosi na-abaghị uru na desktọọpụ) nke dara ada nke ọma Mgbe ọdịda a gasịrị, Microsoft zụtara ọtụtụ ụlọ ọrụ metụtara Internetntanetị, gụnyere otu n'ime ndị na-eweta webmail kasị ukwuu: HotMail. Gburugburu nke a na ọrụ ndị ọzọ, o mechara websaịtị ya akpọrọ Network Microsoft Network! (nke a kacha mara amara ugbu a dịka MSN).
Edere usoro, ụkpụrụ na ụkpụrụ nke Intanet site n'aka ndị a na-akpọ RFCs (Arịrịọ Maka Nkwupụta). Ruo taa (Jenụwarị 2003) enwere 3454 RFCs. Naanị 8 n'ime ha ka ndị ọrụ Microsoft kwadebere (ụbọchị ndị kachasị ochie site na March 1997 na 7 na-ezo aka na ngwaahịa nke ụlọ ọrụ a), nke na-anọchite anya 0,23% nke ngụkọta. Dabere na nke a, anyị nwere ike ịsị na anyị ji Microsoft 0,23% nke teknụzụ nke teknụzụ nke Microsoft.
Microsoft na ọganihu nke Mgbakọ
Ọtụtụ na-enye Microsoft otuto maka ịmebata kọmputa dị nso na ndị ọrụ nkịtị, maka ịmepụtara ọgbara ọhụrụ nke na-eme ka ịnweta kọmputa nkeonwe. Adị na-egosi ihe dị iche: ọbụghị naanị na ọ bụghị uru nke Microsoft mana ụlọ ọrụ a kpatara, n'ọtụtụ akụkụ, ọhụhụ teknụzụ dị ukwuu.
N'ime oge 80, naanị ngwaahịa Microsoft nke pụtara ìhè bụ MS-DOS (nke a na-akpọ PC-DOS na ụdị nke IBM kesara). Ihe ịga nke ọma nke MS-DOS apụtaghị na atụmatụ teknụzụ ya kama ọ bụ na mbụ ọ gara IBM-PC aka, bụ nke ọtụtụ ndị nrụpụta ndị ọzọ depụtaghachiri ngwaike ngwaike ya, na-ebute mmụba nke akụrụngwa "dakọtara". Maka ndị na-emepụta ngwaike a, ọ dị mfe ịkesa akụrụngwa ha tinyere MS-DOS karịa ịzụlite ngwaahịa ọhụrụ yiri ya (nke mere ka ndakọrịta dịkwa na larịị ngwanrọ). N'otu oge, sistemụ arụmọrụ ndị ọzọ nwere oke mma na imewe pụtara, mana jikọtara ya na ngwaike ngwaike nke anaghị agara nke ọma (ihe atụ bụ Apple Macintosh ama ekwuola).
Ná ngwụsị nke afọ ndị 80, DR-DOS, sitere na ụlọ ọrụ Digital Research, pụtara, bụ ndị njirimara ya dị elu karịa MS-DOS (ọ bụ ezie na, ọ dị nwute, ọ ga-agbaso otu ụdị maka ihe ndakọrịta). DR-DOS nke 6 nwere nnukwu olu ahịa ruo mgbe Microsoft wepụtara mbipute 3.1 nke sistemụ Windows ya. N'ụzọ na-akpali mmasị, na agbanyeghị na ngwa ndị ọzọ nke DOS na-arụ ọrụ nke ọma, Windows 3.1 dara mgbe ọ na-agba ọsọ na DR-DOS. Nke a kpaliri ịgba akwụkwọ.
Afọ iri nke '90s malitere na ngụkọta nchịkwa nke Microsoft na mpaghara sistemụ arụmọrụ nke kọmputa nkeonwe, yana MS-DOS na Windows 3.1. Ndị ọzọ malitere ịpụta n'oge a: nsụgharị nke Unix maka usoro 386 (otu n'ime ha bụ nke Microsoft) na OS / 2 sitere na ụlọ ọrụ IBM. Isi ọghọm ndị ngwaahịa ndị a ga-enwerịrị n'ahịa ahụ bụ enweghị ndakọrịta na ngwanrọ dị adị (atụmatụ nke sistemụ ndị a dị iche na nke MS-DOS / Windows) na njikwa ahịa nke Microsoft gosipụtara. Otu eziokwu pụtara ìhè bụ na, nyere ọganihu nke sistemụ Unix, Microsoft kpebiri ịkwụsị mmepụta nke ngwaahịa ya dakọtara na sistemụ arụmọrụ a (akpọrọ Xenix).
Banyere okwu a, n'azụ ngwaahịa Microsoft ọ bụla gara nke ọma, enwere akụkọ ole na ole gbara ọchịchịrị ebe mkpụrụokwu "ikpe", "ohi", "nledo", "oyiri" pụtara ugboro ugboro. E nwere imirikiti ihe ọhụrụ na ngwa ọrụ teknụzụ pụtara ọtụtụ afọ na Microsoft bibiri n'ụzọ ụfọdụ (usoro eji eme ihe maka nke a bụ ịzụta wee kwụsị).
O bukwara ama otu Microsoft si ezube iwebata ihe ohuru ohuru dika ihe omuma ohuru. Dịka ọmụmaatụ, o mere DLLs (ọbá akwụkwọ ndị a na-ebugharị ebugharị) na Windows (mgbe ha dịrịrịrị na Unix ruo ogologo oge), na-ebute ọtụtụ ọrụ na Windows 95 ohere nke ijikwa oke ohere kwa onye ọrụ na Windows 60 (ihe ọtụtụ sistemụ arụmọrụ nyere ọtụtụ afọ) na nkwado nke akwụkwọ akụkọ na NTFS (atụmatụ nke na-enye ohere ijigide iguzosi ike n'ezi ihe nke sistemụ faịlụ na ihe omume nke okuku sistemụ, ọ dịkwala n'ọtụtụ sistemụ arụmọrụ kemgbe ihe karịrị afọ iri).
Ogo nke ngwaahịa Microsoft
Ọtụtụ ndị kwenyere na kọmputa nkịtị na-anọkarị site n'oge ruo n'oge. Ọbụna ọ dị ka ọ dị njọ maka nje kọmputa iji bibie ihe niile dị na draịvụ ike yana nje a nwere ike ịbata n'ụzọ ọ bụla yana ntakịrị ịkpachara anya. Ha emeela ka ọtụtụ ndị kwenyesie ike na naanị otu ụzọ isi zere nke a bụ antivirus emelitere mgbe niile (na Microsoft anaghị enye), ma ọ bụrụ na antivirus ahụ ada ada ... naanị onye kpatara ọdachi ahụ bụ onye edemede ọjọọ nke nje ahụ (na-abụkarị a afọ iri na ụma enwe obere kọmputa). Ọ bụ ihe na-echekarị maka imelite sọftụwia (dị ka a ga - asị na ọ nwere ụbọchị ngwụcha), ị hụghịkwa ezigbo mmezi ọ bụla mgbe emesịrị. Ọ dị ka ihe dị mma maka mmemme gafere 100 Mb n'ibu ma chọọ nhazi ọhụụ na ebe nchekwa dị ukwuu.
Echiche ndị a, nke ọtụtụ ndị mmadụ na-eji kọmputa Windows ebi kwa ụbọchị, bụ nsonazụ nke "mmalite nke teknụzụ" n'ime afọ iri gara aga. Nke a bụ ihe Microsoft rere ọbụna karịa ngwaahịa ya, ruo n'ókè nke na ọtụtụ ndị ọkachamara weere ha dị ka ego nkịtị.
Ngwọta nke oke chinchi na mmemme Microsoft 'rere' ya ka ọ rụpụtara nke ọma na akụkọ ntolite ya. Mgbe Windows version ọhụrụ na-adaba otu ugboro n'izu karịa ugboro abụọ n'izu, ozi a bụ na ọ "dịzị nke siri ike ugbua." Ihe na-adọrọ mmasị na-adọrọ mmasị bụ ihe mere na nsụgharị mbụ nke akwụkwọ ntanetị Microsoft Excel. Ọ na - eme na mmemme ahụ enweghị ike ịgụ faịlụ sitere na nsụgharị na asụsụ ndị ọzọ ebe ọ bụ na, mgbe ị na - echekwa mpempe akwụkwọ dịka faịlụ, ọ na - echekwa aha nke ọrụ ejiri (ọrụ ịgbakwunye na nsụgharị Spanish bụ «nchikota» , mgbe nke "nchikota" bu na nsụgharị Bekee). N'otu oge ahụ, mmemme ndị ọzọ yiri ya dị ka Quattro Pro enweghị nsogbu a: kama aha ọrụ ahụ, ha na-echekwa koodu ọnụọgụ nke e mechara sụgharịa aha kwekọrọ na ya dịka asụsụ ahụ si dị. Nke a bụ ihe a na-akụzi na mmemme mmemme izizi ọ bụla, mana ndị mmemme Microsoft ahụ amaghị etu esi etinye ụdị echiche dị a. Mgbe ewepụtara ụdị nke Excel ọhụrụ, nke e doziri nrụrụ pụtara ìhè, mgbasa ozi gosipụtara ya dị ka nnukwu mmụba: ugbu a ọ ga-ekwe omume ịmepe akwụkwọ sitere na nsụgharị n'asụsụ dị iche iche. N'ezie, ndị ọrụ ahụ chọrọ ịnweta ụdị ọhụrụ ahụ iji merie oke njedebe nke onye gara aga, ga-akwụ ụgwọ maka ikike ahụ ọzọ (ikekwe yana mbelata "bara uru").
Omume dubious nke Microsoft
Asọmpi na-adịghị mma
Enwere ọtụtụ akwụkwọ edepụtara (yana ụfọdụ ndị gara ụlọ ikpe) ebe a na-enyo Microsoft na ịgbanwee koodu nke sistemụ arụmọrụ ya iji mee ka mmemme asọmpi na-agba nwayọ nwayọ ma ọ bụ jiri njehie. Etulatala Microsoft na ikpe ọtụtụ oge (na mgbe ụfọdụ yana mkpebi megide ya) maka mmebi iwu akụ ọgụgụ isi.
Ọ bụkwa ihe a na-ahụkarị maka Microsoft, na-eji ọnọdụ akụ na ụba na akụnụba ya kachasị mma, ịzụta n'aka obere ụlọ ọrụ ndị ahụ na-eguzo n'ụzọ ya site na imepụta ngwaahịa ndị nwere ike iburu nke ya.
A tactic ọtụtụ ji Microsoft nweta ahịa dominance a maara dị ka "makụọ na ịgbatị" (rube na ịgbatị). Ọ na-agụnye ịgbatị ụfọdụ usoro nkwekọrịta ma ọ bụ ụkpụrụ karịa ụkpụrụ dị iche iche n'ụzọ na-enweghị isi na otu, ka oge na-aga naanị ngwaahịa ndị na-emejuputa ha n'otu ụzọ ahụ nwere ike ịmekọrịta n'ụzọ ziri ezi. Enwere otutu ihe omuma atu nke udiri omume a (mmejuputa SMTP na Microsoft Exchange, mgbanwe nke HTTP na ihe omuma Intanet nke Intanet, n’etiti ndi ozo), mana ikekwe ihe kachasi anya bu nke dugara ikpe nke Sun Microsystems bidoro Microsoft maka ịgbatịkwu nkọwapụta asụsụ Java gị mebiri usoro nke akwụkwọ ikike gị, nke na-enye onye ọ bụla ohere imejupụta ihe nchịkọta Java, mana ịhapụ ịhapụ nkọwapụta ahụ. Ebumnuche nke Microsoft chụrụ bụ na mmemme Java ndị mepụtara yana gburugburu mmepe J ++ enwere ike ime ya na Windows, ebe ọ bụ na e mere Java dị ka asụsụ na-enye ohere maka mmepe nke ngwa agagharị n'etiti nyiwe dị iche iche (ihe nke doro anya, ọ bụghị ona ya). Mgbe mbọ a kụrụ afọ n'ala, Microsoft mere mkpebi ịghara itinye nkwado Java na sistemụ ọhụụ ya: Windows XP, Vista, 7 na 8.
Emechiela ma gbanwee usoro
Formatsdị nke echekwara ozi ejirila Microsoft mee ihe na nzube abụọ:
Gbochie inwe mmekọrịta na mmemme "ndị na-abụghị Microsoft".
Mee ka ndị ọrụ nweta nkwalite na nsụgharị ọhụrụ.
Nke a na eme n'ihi na emechiri ụzọ ndị a "emechi" ma anaghị edekwa ya n'ihu ọha. Nke a pụtara na naanị Microsoft maara banyere ha na ọ bụ naanị ya nwere ike ịme mmemme nke na-echekwa ma ọ bụ nweta ozi n'ụdị ụdị a. Inwe ikike zuru oke na usoro ahụ na-enye Microsoft ohere ịgbanwe ya n'ọchịchọ. Ọ bụ ihe a na-ahụkarị maka ngwa dị ka Microsoft Word iji ụzọ ọhụrụ iji zoo ozi na faịlụ .DOC (mgbe niile na nkwa nke atụmatụ ọhụrụ, mana ọ bụghị nke ziri ezi na teknụzụ), nke nwere nsonaazụ kpọmkwem na faịlụ nke ụdị ọhụrụ ahụ enweghị ike. mepee na nsụgharị ndị gara aga (ọ bụ ezie na enyere ụzọ iji chekwaa data ahụ n'ụzọ kwekọrọ, enyere ụfọdụ usoro ndị ọzọ). Nke a pụtara na nke nta nke nta, nyere mgbasa nke faịlụ na usoro ọhụụ, ndị ọrụ ga-akwaga (yana ụgwọ a ga-akwụ) n'agbanyeghị na ha achọghị "atụmatụ ọhụrụ" (onye ọ bụla na-eji ọrụ Okwu site na Office 2010 na-anọghị na Okwu ? nke Office 95?). Ihe Microsoft nwetara site na nke a bụ igbochi nhọrọ nke ndị ọrụ ejiri n'ime eziokwu a.
Microsoft na ndị nrụpụta ngwaike
N'ihi ọnọdụ monopolistic ya, Microsoft nwere ike itinye nnukwu nrụgide na ndị nrụpụta ngwaike PC. Nsogbu a sụgharịrị, dịka ọmụmaatụ, na mmachibido ịre akụrụngwa na sistemụ arụmọrụ ndị ọzọ arụnyere, n'okpuru ntaramahụhụ nke ịnyeghị ego na ire Windows ikikere ma ọ bụ Office nke ndị na-ere ahịa kwuru. Ọ dịghị emeputa nke kọmputa nkeonwe ga-anwa anwa guzogide Microsoft ma hapụ ike ịnye kọmputa ha na Windows arụnyere na mbụ (yana ọnụ ala karịa ọnụahịa mkpọsa). Nke a emeela ka eziokwu ahụ bụrụ na ọ dị ugbu a siri ike inweta kọmpụta ama ama ama na-enweghị ụgwọ nke opekata mpe otu ikikere nke ụfọdụ ụdị Windows gụnyere na ọnụahịa (ọbụlagodi na mmadụ achọghị iji ngwaahịa a) .
N'otu ụzọ ahụ, ọ eruola oke na ndị na-ahụ maka ịnye ọrụ nkwado teknụzụ maka kọmputa nwere Windows bụ ndị nrụpụta n'onwe ya. Nke a bụ ihe nzuzu n'ihi na onye nrụpụta enweghị ụzọ (akwụkwọ dị n'ime, koodu isi, wdg) iji nwee ike dozie nsogbu ma ọ bụ mezie njehie na mmemme ahụ. Ọzọkwa, ndị nrụpụta ga-ekwenye n'okwu ndị a iji gaa n'ihu na-enweta "ọgwụgwọ ọkacha mma" site na Microsoft.
Na mbata nke Windows 7, a bịarutela ọkwa ka ukwuu nke ịdabere na ya: n'ihi "ọrụ nchekwa" ọhụrụ nke Windows 7 (nke na-egbochibeghị otu nje na-arụ ọrụ n'okpuru ụdị ọhụrụ a) ndị ọkwọ ụgbọala nke Ngwaọrụ ga - abụ " nke Microsoft gbaara ikike ka etinye ya na sistemụ. Nke a na - amanye ndị nrụpụta ngwaike ka ha na ụlọ ọrụ wee nwee “ezigbo mmekọrịta”, na-agbakwunye usoro nrụgide ọzọ.
Microsoft, ụgha na ... "uzuoku"
A na-ejikarị okwu ahụ bụ "vaporware" na-ezo aka na ngwaahịa nke ụlọ ọrụ na-akpọsa, mgbe ọ na-adịghị adị (ma ọ bụ na ọ gaghị adị na oge etere ahụ). Ebumnuche nke atụmatụ a, nke ụlọ ọrụ ndị nọ na ọnọdụ nke ịchị ahịa na-ejikarị, bụ ịkụda asọmpi ha ma mepụta ngwakọta nke nchegbu, atụmanya na olileanya na ndị ọrụ ha.
Microsoft ejirila akụ a ọtụtụ oge. Anyị ekwuola maka afọ asaa o were site na ọkwa ọkwa nke Windows na ụdị nke eji ya arụ ọrụ. Ihe yiri nke a emeela na Windows 95 (ekwuputara dị ka Windows 4 na July 1992 wee wepụta ya na August 1995) yana Windows 2000 (nke izipụtara beta mbụ ya na Septemba 1997, n'okpuru aha Windows NT 5, nke mechara pụta na February 2000). N’okwu ndị a niile, e kwere nkwa nke ọrụ na ndozi e chere na ha mechara mezue. N’ọnọdụ ụfọdụ, ewepụtara ngwa ahịa na-ezughi oke, dịka o mere na Windows NT 4, nke ghọrọ ihe eji eme ihe mgbe akpọrọ “Service Pack 3”, ewepụtara otu afọ mgbe amalitere ire ahịa.
Bill Gates, onye na-enyere ndị mmadụ aka
Mgbasa mgbasa ozi na-egosipụtakarị Bill Gates na-enye onyinye nke ngwanrọ ma na-ekwupụta okwu na-agba ume banyere mbọ Microsoft na-eme iji laa azụ azụ na teknụzụ nke mba ndị na-emepe emepe. Onyinye ndị a, ego ha ruru ọtụtụ nde dollar, abụghị ezigbo. A na-agbakọ uru ekwuru na-echebara ọnụ ahịa nke ikikere n'ahịa, mana nke bụ eziokwu bụ na Microsoft nwere ihe efu efu (naanị nke ịkepụta CD-ROM). N'ụzọ dị otú a, ụlọ ọrụ ahụ na-ahụ maka uto ya, na-agbakwunye ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị ọrụ nke ngwaahịa ya na ọnụ ala dị ala karịa mkpọsa mgbasa ozi gaara apụta, na-enweghị itinye ihe egwu ọ bụla na nke ikpeazụ ma ọ dịghị ihe ọzọ ... inweta ezigbo ọhaneze na nloghachi!
N'ọnọdụ ndị ọzọ "onyinye" a nwere nkọwa ọzọ. N'oge na-adịbeghị anya, Gates, site na Bill & Melinda Gates Foundation, nyere ọtụtụ onyinye na India maka ịlụ ọgụ megide ọrịa AIDS. Nke a na - eme n'otu oge na usoro mkparịta ụka na ọmụmụ nke gọọmentị India mere, na ebumnuche nke ịkwalite mmepe nke Free Software na mba ahụ.
Anyi aghaghi ihapu n'uche nke onye ae chere na ya bu nke nwere (dika nke Jenụwarị 2003) ihe ruru nde $ 61.000, nke ruru $ 9,33 maka onye obula bi na uwa a.
Ọdịnihu dị ma ihe na-agba ume ma na-atụ ụjọ. N'otu aka, ọganihu na-aga n'ihu na Software na-aga n'ihu na-etinye breeki na mgbasawanye Microsoft. N'ikpeazụ, mgbe ọtụtụ afọ nke ịchịisi zuru oke, onye mmegide gosipụtara na Microsoft yiri ka ọ na-atụ egwu. Ruo ugbu a, mbọ ha kwụsị uto nke Free Software abaghị uru, na-ekpughere mmegiderịta ya karịa otu oge ma na-ekpughe adịghị ike ya iji sọọ mpi na ihe atụ na-ekwekọghị n'atụmatụ ya (nnukwu ihe nketa ya abaghị uru iji sọọ mpi ije na-adabere na mmepe obodo, nke a na-achịkwaghị achịkwa na mpụga ike ya).
N'aka nke ọzọ, ihe iyi egwu na-egosi na mmiri dịka mbọ iji mepụta ikpo okwu akpọrọ TCPA (Trusted Computing Platform Alliance), nke na-atụ aro ihe nlere anya nke ụlọ ọrụ na-achịkwa kọmputa ma ọ bụghị ndị ọrụ, na-enwe ike igbochi ndị a ma nyochaa ohere inweta ozi. Typedị ebumnuche a na-etinye anyị otu nzọ ụkwụ site na ọnọdụ ọjọọ Richard Stallman kwuru na obere akụkọ ya "Ikike ịgụ."
Ọ dabara nke ọma, ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị mmadụ gburugburu ụwa, ndị agbakọtara na otu nke ụdị dị iche iche, ndị na-alụ ọgụ iji kwụsị ọganihu nke ụdị ihe egwu ndị a na ndị na-abanye na ntopute na ịkọwapụta ụzọ ọhụrụ ndị ọzọ, na-eme ka ọdịnihu pụta dịka ohere nke gbanwee nke ahụ dị ka nkwado nke ọnọdụ ndị ụlọ ọrụ dịka Microsoft wuru n'oge afọ ndị a.
Echiche nke onwe m, na-eburu n'uche isi ihe ndị edere na ederede a (yana ọtụtụ ndị ọzọ nke m na-etinyeghị n'ihi na ha karịrị ikike m nwere) bụ na Microsoft na-anọchite anya nnukwu ihe iyi egwu maka mmepe nke mgbakọ na, nke ka njọ, na mmepe n'efu na ụwa nke ọdịnihu, na-enwewanye njikọ na teknụzụ ozi. Anyi aghaghi ighota na obughi nani nsogbu oru, kama na enwere otutu nsogbu.
Otu igodo maka ntọala nke ihe Bill Gates rụzuru n'ime afọ iri abụọ na ise gara aga bụ nnukwu ozi ụgha (na n'ọtụtụ ọnọdụ enweghị mmasị) nke dị, nke mere ka o kwe omume, site na mkpọsa ahịa dị oke mkpa, iji nweta nke ahụ nke ndi mmadu na otutu ndi okacha-amara na ntughari a nwere onodu zuru oke banyere ebumnuche nke ulo oru a na ezigbo onyinye ya na teknụzụ ihe omuma.
Ndị na-eweta ezigbo ọganihu bụ ndị na-arụ ọrụ maka mgbanwe sayensị na teknụzụ, ọ bụghị ndị na-anwa isi n'ụzọ ọ bụla ịmanye ngwaahịa ha, na-ebibi ọganihu, ụkpụrụ na-emebi, izu ohi echiche, na-ebibi ndị nwere ike ịsọ mpi. Maka ihe a niile, achọtala m azịza nye ajụjụ a.
Microsoft? Mba, daalụ.
Nwebisiinka (c) 2003 Javier Smaldone.
A na-enye ikike ikike idetuo, kesaa, ma ọ bụ mezie akwụkwọ a n'okpuru usoro nke GNU License Documentation Free, Version 1.2 ma ọ bụ nke ọ bụla mechara nke Free Software Foundation bipụtara; Edere akwụkwọ a na-enweghị Ngalaba Na-adịghị agbanwe agbanwe (ọ bụghị Ngalaba Na-adịghị Ndụ), na-enweghị Ederede Cover (ọ bụghị Ederede Nkpuchi ihu) na enweghị Edemede Nkpuchi (ọ bụghị Akwụkwọ Nkpuchi Akwụkwọ)
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » GNU / Linux » Bill Gates na Microsoft ... akụkọ ifo, akụkọ ifo na ndị ọzọ
Ihe 72 kwuru, hapụ nke gị
Na ndị anyị na-amụ ihe, ọ bụ ihe ihere karịa ikwu ya, mana seminar echere na m ga-ewere ka a ga-akpọ Microsoft Office Seminar na iwu ha chọrọ ka m rụọ ọrụ m na Office 2010 na windo 7.
Ihe ọ na-aghọtaghị bụ na sava mahadum m na-eji Debian, nke ahụ ga-abụ ụzọ abụọ ma ọ bụ ihe yiri ya.
Edemede dị mma na-enweghị mgbagha.
Ugbu a, anyị chọrọ onye ọzọ akpọ Steve Jobs na Apple ... akụkọ ifo, akụkọ ifo na ndị ọzọ
Ọtụtụ ihe chọrọ ụbọchị ndị a pro mac
Nwunye di nma, ekele maka ikwu eziokwu.
Ke post site Elav ada ya na tebụl maka mkparịta ụka nke ihe Linux kwesịrị ịdị na desktọọpụ.
O mere nke ahụ na nzube, naanị site n'ịgụ aha ị maara na a ga-enwe a ire ọkụ. Mmmmmmmmmmmm
JUAZ JUAZ !!!
Ezigbo mma, amaara m ụfọdụ ihe ma amaghị m ọtụtụ ihe. Ọ bụrụ na m ga-ekwu maka nke ọ bụla na gburugburu ebe ọrụ m, a ga-akpọgide m n'obe ma kpọọ m onye nrụpụta linux, n'agbanyeghị na ha na-ekwu okwu mgbe niile banyere nje na otu kọmputa ha si daa mgbe ha na-eme ihe. Ọ dị mma ịmara na ọ bụghị naanị m na-eche na enwere nsogbu na Microsoft.
Ezigbo isiokwu, ọ bụ ezie na ọ bụrụ na m kwuo okwu banyere nke ọ bụla n'ime ebe ọrụ m, a ga-akpọgide m n'obe ma kpọọ m dị ka ntọala Linux; n'agbanyeghị na ha na-ekwukarị banyere nje na otu kọmputa ha si daa mgbe ha na-eme ihe. Ọ dị mma ịmara na ọ bụghị naanị m na-eche na enwere nsogbu na Microsoft.
Ezigbo ihe ederede ... Echere m na mmelite ga-adị mma, na nkwekọrịta na Mahadum, ebe Microsoft "na-enye" ​​Software na Mahadum na ụmụ akwụkwọ ya.
N'ihi ya, ịdabere na ngwaahịa ndị a mgbe ha na-aga ịzụlite ọrụ ha dị ka ndị ọkachamara.
Zaghachi € quiman
Ezigbo isiokwu! Kekọrịta ...
Zaghachi na longinus
uff ihe ezigbo ederede m hapụrụ ka m nọ ọdụ ogologo oge na-enyocha ihe niile, site n'ụzọ dị ukwuu ọrụ na-ekele gị nke ukwuu ekele Ariki
Magburu onwe D:, M na-agụ ya kpamkpam
Zaghachi Abimael Martell
Edemede dị ezigbo mma, saa mbara. Ihe a ga-ekwukwa bụ M $, dị ka MAPple na-akụziri ndị ọrụ ya ka ha kwenye na ị thatomi na ịkekọrịta bụ paire (na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mpụ kacha njọ)
Ihe na-adọrọ mmasị n'ezie ma ọ bụrụ na e nwere eziokwu ndị a na ọtụtụ eziokwu ndị na-abịabeghị n'ìhè n'ihi na ụfọdụ ndị ji ego ha achọghị ka ha mara 😀
Ieslọ ọrụ dịka Microsoft ma ọ bụ Apple bụ paradaịs nke hel, tupu anyị amara ya, ha ga-abụ ezigbo nsogbu maka mgbanwe nke ọha mmadụ na ụwa a nke ọdịmma akụ na ụba katọrọ. Ah, echefuru m banyere Google.
Echetara m mgbe Bill Gates zụtara weebụsaịtị ahụ n'aka Homer Simpson wee malite ibibi ihe niile wee sị: Abaghị m nde mmadụ site na ịde akwụkwọ ndenye ego.
Na akụkụ nke "Emechiri na Formgbanwe Formats" ị dị ezigbo mma enwere ọtụtụ ihe ị na - enweghị ike ịnwe mgbe ị mepeghị Okwu 2010 (ma ọ bụ ngwaọrụ Office ọ bụla) na ụdị ochie ya.
Amaghị m ma ọ bụrụ na ị chọpụtala na ụdị ọhụrụ nke MS Office anaghịzi akwado usoro ochie .doc, .xls, wdg. Amaghị m otú ọ ga-esi emetụta obodo Linux n'onwe ya na amaghị m ma ọ bụrụ na Office Libre, Apache Open Office ma ọ bụ Calligra na-akwado ya nke ọma ma ọ bụ chekwaa na .docx, xlsx, wdg.
Edere m ihe kpatara ya.
I dere ya nke ọma.
ezigbo mma ikwu. Enwere m mmasị na blọọgụ antrada ahụ, echetara m okwu onye nkuzi mmemme m kwuru, ọ sịrị na "ugbu a sọftụwia karịrị akụrụngwa, yabụ na anyị chọrọ igwe dị ike taa" ... .. enweghị ikwu. site n'ụzọ, o nwere echiche nke windoze fanboy. na blọọgụ a ekwuru m ọtụtụ ugboro banyere ịjụ ngwaahịa ndị a na mahadum, ma ugbu a na windo 8 ha niile dị ka ndị enyi nwanyị na-adịghị mma ._.
Ebumnuche nke iweghachite ma bipụta edemede a site na Javier Smaldone bụ ịmara na ọtụtụ "ihe kpatara" e zitere n'ọtụtụ ebe banyere Linux bụ ebumnobi karịrị okwu teknụzụ. Otu uru Linux bara bụ na ọ bụghị ike mechiri emechi na njikwa ya na iche iche ya bụ ihe na - eme ka ọ sie ike mana n’otu oge ahụ adịghị ike.
Na nzaghachi nye Son Link M na-emekwa mkpokọta Apple, na ọkachasị Steve Jobs.
Daalụ maka nkwupụta gị ma enwere m olileanya na ọ ga-aba uru ma nyere ndị ọzọ aka imeghe anya ha na eziokwu na enwere nhọrọ ndị ọzọ sitere na Microsoft na Apple nke ịdị elu na ntụkwasị obi dị elu.
M na-atụ anya anya Steve ọrụ yana Richard Stallman 🙂
Zaghachi na orbito
Heh Heh, ezigbo echiche, echeghị m ya echiche. Echere m na ọ ga-abụ ezigbo mmega ahụ iji kwuo maka Stellman na Maazị Trovalds (ọ dị nwute ma ọ bụrụ na m mehiere, anaghị m echeta etu esi asụpe ya n'oge a).
Mana eziokwu gbasara Ọrụ na-atọ ụtọ yana gbasara onye ọlụlụ ya onye ọ tọrọ ntọala Apple (Steve Wozniack).
Abọchị ole na ole ndị ọzọ, m ga-adị njikere, anyị ga-ahụkwa ihe ga-eme.
Onaji 63 dijo
Ndewo, ị nwere ederede ederede maka Apple na Steve Jobs? Ọ ga-abụ ihe na-atọ ụtọ ịmara akụkọ ihe mere eme.
RMS na-adọrọ m mmasị, ọkachasị n'ihi na Free Software Foundation na-eji debian na-enweghị ego na sava ya, ebe m chọpụtara na amalitere m ịmara na RMS anaghị emezu ọtụtụ ihe ọ na-ekwusa, yabụ na m ghọrọ nwa nwoke GNU fan dị ka ndị a , Abum SL onye obi uto, obi di mu uto ihu ndi windo n’agu
Nzaghachi ka ọ bụrụ
Akụkọ ahụ masịrị m nke ukwuu. Ihe abụọ, na-enweghị njikọ:
Enwere m otu akwụkwọ ntinye akwụkwọ DR-DOS na akwụkwọ ntuziaka onye ọrụ gafee ebe ahụ, nke tinyeburu sistemu windo. Anaghị m echeta afọ ahụ n’oge ahụ, ma m na-ewere ya ka ihe ịmata ihe.
Nkwuputa na-akọwapụta ikikere nke ederede a nwere ike iduga arụmụka ahụike banyere ịgbanwe ikike nke <° Linux. Maka m ọ ga-abụrịrị ihe a na-anabata, na-ahapụ ya dị ka ọrụ ọdịbendị n'efu n'ụdị zuru oke site n'ịgbanwe ya na CC-BY-SA, ma na-aga n'ihu na-echekwa ọdịnaya ahụ nke ọma.
Kedu maka Anti.
Ọ bụrụ n'eziokwu, usoro windo oge gboo mana pụtara ìhè nke ọtụtụ n'ime anyị nwere ịnụ ọkụ n'obi n'oge ahụ. Gburugburu ebe a na-akpọ GEM ma taa o nwere ụdị dị iche iche a na-akpọ openGEM nke na-arụ ọrụ na sistemụ a na-akpọ Free DOS.
Mba DR-DOS 5.0 na-eweta ViewMAX. M nwere akwụkwọ ntuziaka na aka iji nwalee ya:
Christopher nnukwu dijo
Ezigbo isiokwu: D…
Zaghachi Christopher Castro
onye isi, i ritela aka, kụọ aka ♪
naanị egwu egwu, ezigbo ederede xD
Ezigbo isiokwu enyi
Zaghachi Sergio Esaú Arámbula Durán
Ezigbo ederede. Ikwuru OS / 2 na ikwusi anya mmiri. M ka nwere CDs mbụ nke 2.1 na OS / 2 Warp kachasị ọhụrụ, nke bịara na nkwupụta okwu arụpụtara, ikike ikike olu na okwu nhazi, wdg.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu ihe ọmụma gị na isiokwu ahụ (ma gbasaa isiokwu a n'ihu, ọ bụrụ na ịchọrọ) lelee ihe ndekọ MuyComputer a (n'ezie enwere abụọ, ị ga-ahụrịrị na ibe njikọ njikọ nke abụọ), ebe akụkọ ahụ nke otu esi gwa Microsoft, na enweghị ike nke IBM, gweriri otu sistemụ arụmọrụ kacha mma dị n'oge ahụ. Ọ gafeela:
Kedu maka Juan Carlos.
N'eziokwu ọ akwụsịbeghị, taa a na-akpọ ya openStation na IBM na-eji ya maka ahịa pụrụ iche (veriticales) na eziokwu na-ekwu eziokwu (agbalịrị m ya mana ahụla m otu o si arụ ọrụ) ọ dị mma.
Ndo, mana aghaghi m igosi na i zighi ezi, ana akpo ya ugbua eComStation, ma na enwere ya site na Serenity Systems; ya na onyinye ndi ozo nke ndi IBM nyere.
Echefuru m itinye ebe ahụ na OS / 2 bụ ntọala nke Windows NT.
Ikwuru eziokwu, enwetara m aha ahụ mana ka m na-agwa gị, agbanyeghị na anwalebeghị m, enwetara m ihe kwuru na ọ nwere ntụkwasị obi nke ukwuu.
Daalụ maka mgbazi na ekele.
Onweghị ihe ọ bụla, enweghị ihe ọ bụla, ọ bụ ya mere na ịnweghị ozi ọjọọ, ọ nweghị ihe ọzọ. Ha emeela m ka m chọọ itinye ya na igwe mebere iji cheta oge ochie.
ugbua abiala nwa oge gara aga iji kpuchie m:
hụrụ na http://www.domatix.com/blog/%C2%BFodiamos-los-informaticos-a-microsoft
Nke ahụ ziri ezi, n'eziokwu mgbe m hụrụ ya, echekwara m ya kemgbe ahụ m debere ya na nkwado ndabere m. N'ezie, m na-ezo aka na onye edemede ya, Javier Smaldone, m tinye GPL nke na-enye ohere iji ya mee ihe.
Odi gi nma na ekele diri gi.
Enwere m edemede a kemgbe njedebe nke 2004 ma edebe m ya n'ihi na m na-ewere ya dị ka echiche dị mma ka ọgbọ ọhụrụ nke ndị ọrụ mara ihe ha na-agaghị ebi na nke ha agaghịkwa achọta.
Na mgbakwunye na Microsoft, mba ekele, aga m etinye ụlọ ọrụ ndị ọzọ dịka Apple, Intel, Google na ndị ọzọ.Ọ bụrụ na edere m ha, okwu a ga-agbatị ogologo oge, omume ndị a kpọtụrụ aha na-eme site na ụlọ ọrụ niile ruru n'elu, mgbe ha niile bụ ụlọ ọrụ na ụzọ ha ga-esi nweta ego bụ ego ha na-akpata.
Linux bụ usoro agbachitere na enweghị ikike ma ọ bụ mmasị na ahịa, ibu ọrụ ahụ dabara na ndị ọrụ nwere ihe ọmụma karịa, ndị maara ebe ihe si bịa, ma kọwaara ha ihe, na-enye ha uto ihe ngwanrọ bụ n'efu mana na-agwaghị ha ihe ọ bụ?
Ieslọ ọrụ ugbu a nwere ike karịrị akụrụngwa nke smartphones, buru ibu naanị ịhụ na ọ bụrụ na mmadụ chọrọ ịwụnye rom ma ọ bụ melite na nsụgharị ọzọ nke gam akporo, a ghaghị ime ya site na ịkpa ike, n'ihi na ụlọ ọrụ anaghị ahapụ mmelite mgbe cell Ekwentị na ngwaike nke o nwere na-akwado ya nwayọ ma ọ bụrụ na ha emechaa, a ga-amapụ berry nke abụọ, nke bụ ụlọ ọrụ ekwentị ga-adị njikere ịgbakwunye mmemme nzuzu 5 nke ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ dịghị onye na-eji ma debanye aha ọhụrụ ahụ .
Nke a bụ otu n'ime ọkacha mmasị m isiokwu, dị nnọọ ezi uche, magburu onwe ya isiokwu.
Zaghachi Diego Campos
Onye dere edemede a hụrụ Bill Gates n’anya.
Eziokwu, na ihe ndị dị ka boot boot nke ndị nwere mmeri 8 ga-abịa anaghị enye nnukwu olile anya.
Agbanyeghị na amaghị m ihe na-eme na obodo m, ihe karịrị 80% nke ndị ọrụ na azụmaahịa na-eji pampụ mbipụta nke xp kemgbe 2005 ma ọ ka dị etu ahụ, mmụba a na-abawanye ma e jiri ya tụnyere ngwaahịa microsoft ndị ọzọ. Ọbụna onye agbata obi zụtara mmeri 2000 maka kọmputa ochie ya na nkwụsị ma na-eche. Mexico ọ na-anọchite anya ire ere azụmaahịa maka Microsoft naanị na mpaghara gọọmentị?
Edemede mara mma, ahuru m ya n'anya.
Ntinye dị mma, dị ọcha, kpọmkwem, gburugburu na nkenke. Na "akụkọ ifo" nke Bill Gates abụghị ihe ọzọ karịa ndọtị na-enweghị isi nke otu ụgha na ọkara eziokwu nke Microsoft n'onwe ya na-ahụ maka ịgbasa, ọbụnadị taa, ụfọdụ ụmụ oke bekee na-acha uhie uhie kwenyere na ya dịka Oziọma ahụ dị ka Saint William si kwuo Ọnụ ụzọ. Ekele maka ị napụta isiokwu ahụ na imelite ya.
Tupu m chee echiche ọjọọ banyere Microsoft, ugbu a, echere m na ọ ka njọ. O kwesiri idebe.
Zaghachi to ren434
Kale Vin dijo
Edemede mara mma, nke zuru oke, ọtụtụ eziokwu iburu n'uche mgbe niile!
Zaghachi Cale Vin
Enwere m obi ụtọ ịkọrọ Javier mpaghara (Cordoba), na blọọgụ ya enwere isiokwu na-adọrọ mmasị gbasara sọftụwia n'efu:
Microsoft aghụghọ unyi bịara ìhè ekele na-akpọ "Hallowen Documents", na-akpali maka otu isiokwu, ọ na-ewute m na m mere ihe ọjọọ nke English:
Aghọtara m na ị kpọrọ Microsoft asị, mana ọrụ ebere nke Bill Gates dị adị n'ezie, mmetọ ị na-eme ha adịghị iche na Microsoft FUD na-emebu.
Mgbe Bill kere Microsoft na-agụ akwụkwọ na Harvard, na ịnwa igosi ya na ọ baghị uru n'isiokwu ahụ, ọ dịkwa m ka ọ bụ ihe ọjọọ nye m.
Ọ bụ ezie na m na-eji Linux site na nkwenye nke onwe m, Windows 7 bụ ezigbo ngwaahịa mara mma nke ukwuu. Ọfịs na-abụrịrị ngwaahịa dị mma, ọ dị gị ka ị chefuola ịkọ ya.
Microsoft n’agbanyeghi na omume ya rụrụ arụ enyela aka na mmepe kọmpụta, ọ bụghị akụkọ ifo nke mere ka kọmputa bịarukwuo ndị mmadụ nso, na-eme nke ọma na ihe Linux anaghị eme ọfụma, mgbasa ozi. Achọrọ m igosipụta isi ihe dị mma nke Linux iji katọọ onye ahụ na-ama ya aka, ọ dị ka ọ bụghị ụzọ dị mma iji kpọsaa usoro ahụ.
Nsogbu bụ na "ọganihu" na ịkọwapụta na Microsoft enwetala naanị uru ndị nwe ha, ka anyị ga-atụnyere onyinye ndị mmadụ dịka Vinton Cerf, Berners-lee ma ọ bụ Dennis Ritchie na ndị ụlọ ọrụ ahụ na onye bụbu onye isi ya? Chetụ echiche ihe ntanetị ga-abụ ma ọ bụrụ na Internet Explorer na ụzọ "otu" o siri ghọta ụkpụrụ agaraghị enwe asọmpi. Microsoft n'azụ, ọ bụ osisi na wiil na mmepe nke teknụzụ. Banyere.
Onye nlekota dijo
Ndewo Santiago, ị na-ekwu na Win7 bụ ezigbo ezigbo ngwaahịa na-egbu maramara, echere m na ọ bụghị nke ukwuu. Ana m arụ ọrụ 8 awa kwa ụbọchị na sistemụ a, ma ọ dịkarịa ala otu ugboro n'ụbọchị, enwere m nsogbu, m na-ahazi ọdụ data na mmemme SPSS, na mgbe ụfọdụ, m ga-agbanye usoro ahụ, ma tufuo akụkụ dị mma nke ọrụ ahụ (mgbe ụfọdụ ọ gaghị ekwe ka ị gbuo usoro ahụ akwụgoro).
Mgbe ụfọdụ, ọ na-ajụ oyi mgbe m gbalịrị iwelata ngwa niile n'otu oge (windo + D) ọ na-ewe n'etiti 7 na 10 sekọnd iji kpoo, na site na sistemụ, dịka maka MS Office m nwere ike ịgwa gị na Excel bụ ngwá ọrụ nke mma, dị mfe iji, dị mfe iji programmụ macros na User na VBA; ma Outlook nke bụ otu ụlọ ahụ, n'otu ụzọ ahụ na-enye m nsogbu, oge niile, ọ dịkarịa ala otu ugboro n'ụbọchị, maka m nke na-adịkarị ma na-akpasu m iwe, site na akụkụ a achọpụtaghị m ihe ziri ezi, ma ọ bụ ihe kpatara na ọ malitere , ebe ọ bụ na e nweela oge na omume dị iche iche.
Anọ m na-eji ya na-arụ ọrụ maka ezigbo afọ ole na ole ugbu a na mmelite ọ bụla m nwere olileanya na ha edozila, gịnịkwa ka ị chere? O mebeghị. Ihe m nwere ike ịgwa gị bụ na ọ bụghị ngwaike nke kọmputa ebe ọ bụ na ọ bụ QuadCore na 4 GB nke Ram, karịa ezuru iji na-agba ọsọ a usoro.
Banyere MS Office, nke a na-eme karịa LibreOffice na ọrụ; ma na-abịa, ole n'ezie na-eji niile atụmatụ na functionalities nke MS Office? Ihe ka ọtụtụ n'ime ha, ọbụnadị LibreOffice fọdụrụ, nkọwapụta bụ na ọ dịchaghị ka MS Office, yana ụzọ ojiji ya dị iche na nke ejiri MS Office, dịka ọmụmaatụ ọ na-esiri m ike ịmụ mmemme macros. in Calc Mgbe na MS Office ha dị mfe, agbanyeghị ha na-enye otu nsonaazụ ahụ, naanị na ụzọ isi mee ya dị iche na ị ga-amụta ya, ọ bụkwa ihe ọtụtụ na-achọghị, obere nkọwa, nri?
Agbanyeghị, n'ụlọ m nwere laptọọpụ nke nwere obere akụrụngwa akụrụngwa na desktọọpụ na-arụ ọrụ, yana GNU / Linux arụnyere, na-eme otu usoro ahụ m na-arụ ọrụ, naanị site na ngwa mepere emepe, egwu, ihe nchọgharị ịntanetị ... (na arụ ọrụ na-adịghị ekwe) na ị maara ugboro ole m na kọmputa e eyịride ma ọ bụ oyi kpọnwụrụ, ọ dịghị onye 🙂
ezigbo ederede ... ma ha ziri ezi na m 'crosoft abaghị uru na mmepe teknụzụ yana dịka e kwuru ¨ RudaMacho ¨ (Chee echiche ihe Web ga - abụ ma ọ bụrụ na Internet Explorer na ụzọ "otu" ya si aghọta ụkpụrụ adịghị asọmpi Microsoft bụ mbubreyo, ọ bụ osisi na wiil na nkà na ụzụ mmepe) na ihe m mgbe niile kwuru »MS KWES INR IN KWES WITHR WITH MS»
Ezigbo isiokwu. Ikekwe enwere ike ịgbakwunye patent na ndepụta nke Microsoft rịọrọ (ma nata) ogologo oge gara aga nke sistemụ arụmọrụ na-abịa na arụmọrụ nwere oke, yana iji rụọ ọrụ zuru oke ma ọ bụ wụnye mmemme nke Microsoft meghị, ị ga-akwụ ụgwọ maka asambodo nke ahụ "rụọ ọrụ" arụmọrụ chọrọ. Na ha etinyebeghị ya n'ọrụ apụtaghị na ha ebughị n'obi ime ya, ma ọ bụ n'ụzọ ọzọ, gịnị kpatara ha ga-eji tinye akwụkwọ ikike patent ahụ?
Ikwu ụgwọ ma ọ bụrụ na onye ọzọ chere banyere ya.
Ndewo, abụrụ m ọhụụ na blọọgụ ahụ, agbanyeghị na m agụ ya ruo oge ụfọdụ, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na anaghị m agba onwe m ume ịza ajụjụ ọbụna dị ka xD na-enweghị aha
Enwere m mmasị na post a, ọ bụ ezie na ọtụtụ n'ime m dịka blog a.
Ọ dịkwa mwute ịhụ otu ụlọ ọrụ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ha ejichi ike na-achịkwa Mgbakọ wee si otú a "na-amanye" ndị nrụpụta ịzụlite naanị sọftụwia kachasị mma maka kpakpando ha na OS dị mma ma ọ bụrụ na m ga-anọgide na-ekwu ọtụtụ arụrụala nke ụlọ ọrụ a mere. Aga m ekwu ogologo okwu.
Ihe kachasị njọ bụ na m na-atụnyere ọnọdụ a na nke ugbu a na Google na gam akporo, nke n'onwe ya yiri m nke ukwuu, nke na-ekepụta "okike" ya dịka Microsoft mere, ikekwe ebumnuche Google adịghị ka obi ọjọọ ma ọ bụ obi ọjọọ dị ka Nke Microsoft, mana m na-agbasochi ngbanwe mgbe niile na mpaghara ekwentị, yana mgbe ụfọdụ Google na-achịkarị ụjọ.
Agbanyeghị ndi nwem, ekele m na blog, o di uto nke ukwuu, enwere m olile anya na ha ga na ano otua, echekwara m na m ga ekeputa nke m oge ufodu.
Zaghachi na blaxus
mana n'adịghị ka Microsoft, google anaghị amanye gị ka ị jiri ngwa ya, ma ha bụ web, desktọọpụ ma ọ bụ mkpanaka, ya bụ, google na-akwado ntọala mozilla n'agbanyeghị na ha nwere ihe nchọgharị ha, ma ọ bụrụ na anyị ahụ ya n'akụkụ nke ọzọ, Google ya onwe ya abughi ihe obula, obu ulo oru ikuku, oburu na echi adighi intaneti, obuna ebe ahu ka m ga aga google ... obu ulo oru efu, ma ee, obu ibu, ma buru ibu na isi ya n’ebe ufodu. merie ha maka ogo nke ọrụ ha ma ọ bụghị ịmanye gị iji ha.
N'uche m, ụlọ ọrụ ndị a anaghị atụnyere, m ga-atụnyere Apple na Microsoft karịa, n'ihi na, n'echiche m, ha abụọ bụ mafia na sayensị kọmputa.
mana enwere nnukwu ọdịiche dị n’etiti google na Microsoft, google anaghị amanye gị ka ị jiri ọrụ ha, ma na weebụ, ma ọ bụ na desktọọpụ, ma ọ bụ na ekwentị mkpanaaka, ha na-atụ aro ihe ọzọ, ma ọ bụrụ na anyị lelee google bụ ụlọ ọrụ na-enweghị ihe ọ bụ, n'onwe ya, google nwere ihe ọ bụla ma enweghị ihe ọ bụla, ọ bụrụ na echi ịntanetị agwụ, google rutere ebe ahụ, n'aka nke ọzọ, ana m asị na ha anaghị amanye gị ka ị jiri sọftụwia ha n'ihi na ha ka na-ejigide ntọala mozilla, ọbụlagodi mgbe google Ha nwere ihe nchọgharị nke ha, ee, Google bụ nnukwu intaneti, mana ha enwetala ọnọdụ ha n'ihi ogo ọrụ ha, ha na-enweta ọtụtụ ego ha site na mgbasa ozi na njin ọchụchọ, ma ugbu a, ha anaghị ụgwọ maka ọrụ ha.
M ga-eji Microsoft tụnyere Apple, n'ihi na, n'echiche m, ụlọ ọrụ abụọ ahụ bụ mafias na ụwa kọmputa.
ma ka ha na-ekwu n'elu ebe ahụ, n'etiti ihe ụtọ na agba ...
Ezigbo edemede, ezigala m ya ka ọ gụọ ụfọdụ “ndị enyi” na-eme ifuru maka MS
Anọ m na Arch na Firefox .. Gịnị kpatara m ji nweta nzuzu -windo $ - akara ngosi?
Ọ dị n'aka onye ọrụ gị: https://blog.desdelinux.net/tips-como-cambiar-el-user-agent-de-firefox/
xD achoro m ilu onye dere xDD a
Zaghachi Diego Silberberg
Edere nke ọma ma rụọ ụka banyere isiokwu ahụ. Ọ dị m ka ya bụrụ na ị nwere ike ime ihe analogolo na usoro akụkọ ifo ndị mepere emepe na mgbasa echiche na-eduhie eduhie banyere Apple na Steve Jobs, nke yiri ka ọ naghị adabara m karịa nke Microsoft na Gates. Enwere ndị kwenyere na Ọrụ rụpụtara kọmputa (ma ọ bụ kọmputa) ekwentị, mbadamba ụrọ, na kwa ngwaọrụ multimedia, ha: s
ugbua kariri otu aghaghi igwa akuko a nke na-emeghachi ugboro ugboro
ele mmadụ anya n'ihu dijo
Anọ m na Debian distros ma ọ bụ nkwekọrịta na-agbagha n'oge gara aga ka anyị gwa onwe anyị eziokwu, enwere nnukwu azụmahịa abụọ ebe a.
Microsoft bụ azụmaahịa ngwanrọ nkeonwe, mana imirikiti ndị okike dị iche iche bụ azụmaahịa ngwanrọ n'efu, ma ọ bụ na ọ bụghị eziokwu na ọtụtụ nwere ọgaranya site na ịkwalite onwe ha dị ka ndị okike nke nnwere onwe ọgụgụ isi
Ka anyị chebe ngwanrọ na-akwụghị ụgwọ ma ọ bụ nke nwere ikike dịka ọchịchọ anyị, ọchịchọ ma ọ bụ mkpa anyị si dị, mana maka ugwu nke anyị, anyị anaghị alụ ọgụ a, ya na ọkọlọtọ nke nnwere onwe dị ọcha, nwa agbọghọ na-amaghị nwoke, ma ọ dịkarịa ala, ha na-ekwu eziokwu na naanị ihe ha choro bu ego
Zaghachi na akpachapụghị anya
Ọ dịghị onye na-ekwu na ọ bụ ihe ọjọọ na Microsoft ịkpata ego, nsogbu bụ etu o si mee ya, atụmatụ ya ruru unyi nke dugara ya inwe ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu ihe n'akụkụ dị iche iche nke ngụkọta onwe onye na "onye ikeketeorie" ọ bụla ga-agwa gị nke ọma na monopolies na-abụkarị ọjọọ. Banyere "nnwere onwe dị ọcha", enwere ọtụtụ ndị na - eme ya na ndị na - agbasa ozi (blọgụ a dịka ọmụmaatụ) nke sọftụwia na - akwụghị ụgwọ na - eme ya na - enweghị atụ, na - atụghị anya nloghachi ọ bụla, mana n'ezie ọ dịghị ihe dị njọ n'ịchọ ị nweta ego na ngwanrọ n'efu. Banyere.
Kedu maka Chunk anaghị ele mmadụ anya n'ihu.
Lee, enwere nnukwu ọdịiche dị n'etiti ụdị azụmaahịa nke ngwanrọ ngwanrọ (ụdị Microsoft) na sọftụwia na - akwụghị ụgwọ (n'okpuru atụmatụ ọ bụla masịrị gị). Njirimara ikike ị zụrụ ikikere maka SINGLE COMPUTER (ọ bụrụ na ị wụnye ya na nke ọzọ bụ mpụ n'ihi na ọ bụ akwụkwọ iwu na-akwadoghị) ma ọ bụrụ na ọ na-eweta njehie ma ọ bụ atụmatụ ọhụrụ apụta, ị ga-akwụ ụgwọ maka ya. Ugbu a ị nwere ike kesaa, detuo ma ọ bụ nye n'efu ngwanrọ n'efu ma ọ bụ na-abụghị nke nwere ikike, mana sọftụwia ahụ bụ n'efu (n'ezie, belụsọ ma ịchọrọ ire ya ma weghachite ọnụahịa nke usoro mgbasa ahụ), ịnwere ike iwunye ya ọtụtụ oge ka ị nwere ike ọ bụrụ na enwere mmelite ọ bụla, mgbazi ma ọ bụ mmelite enweghị ụgwọ ọzọ.
Ugbu a, abụrụ m onye ndụmọdụ na teknụzụ ozi ma ọ bụ IT ma m na-eji sistemụ ndị nwe ụlọ na nke mepere emepe (dabere na ndị ahịa). N'ihe banyere ndị nke onwe, ana m ana ihe niile (ikikere, ọnụọgụ PC, ọzụzụ, ọnụ ọgụgụ ndị ọrụ, ihe nkuzi, ntinye, wdg). N'ihe banyere sọftụwia na - akwụghị ụgwọ, ana m enye ya onye ahịa ya naanị m na - akwụ ụgwọ ụgwọ m (ọzụzụ, ihe eji eme ihe na ntinye). Dịka ị ga-achọpụta na enwere nnukwu ọdịiche na ọbụnadị Stellman n'onwe ya ekwuola ya: ọ nweghị ihe dị njọ n'ịkwụ ụgwọ maka ndụmọdụ.
Can nwere ike ịgwa m na ole dị iche nwere ike ịdị, nke ahụ dabere na m ga-enye gị ihe atụ. Ọ bụrụ n’itinye nwụnye nke MS Office 2010 Suite na ị ga - azụ ndị ọrụ (ọ bụrụ n’onwere 5), nke a pụtara: 5 akwụkwọ ikike Office ($ 3,000.00 MX ọ bụla), ihe Microsoft nke gọọmentị ($ 2,500.00 MX ọ bụla), ọzụzụ na ndị ọrụ ($ 2,000.00 MX ọ bụla) na ntinye ($ 300.00 MX kwa PC).
TOTAL = $ 39,000.00 MX.
Otu ihe atụ mana na LibreOffice: Ọnụ ego ngwanrọ ($ 0.00), Ihe Ihe Omuma ($ 1,500.00 MX), ọzụzụ onye ọrụ ($ 2,000.00 MX ọ bụla) na ntinye site na PC ($ 300.00 MX).
TOTAL = $ 19,000.00 MX
NTKWU ND IN INLỌ = $ 20,000.00 MX
Dịka ị ga-achọpụta, ọdịiche dị iche na nke onye ahịa dị oke. Nke a bụ uru nke sọftụwia na - akwụghị ụgwọ, nke na - enye gị ohere ịrụ ọrụ n’ireghị sọftụwia ahụ mana ama gị, nke bụ ebubo.
O ..o, hehehe, ka anyi kwusi igwu egwu. Bill Gates mepụtara kọmputa nkeonwe, Intanet, naanị cherị cherry, DOS, òké, telivishọn. Ah kwa, Santa Claus nyere m Microsoft Surface ụnyaahụ, naanị ya ga-aga, ma hapụrụ m ya na osisi Krismas. Aghọtaghị m ihe kpatara na mmadụ niile na-ekwu ụdị ihe ọchị ahụ XD.
Naanị ihe BG rụzuru bụ ilekwasị anya na ire sọftụwia na ụlọ ọrụ ngwaike.
Na mbu, komputa bu nke ndi physics na mathematicians, ndi dibia MIT, wdg.
Mgbakọ na ọkwa onwe onye bụ ihe a na-etinyeghị n'uche.
Microsoft hụrụ azụmaahịa ahịa ngwaike ma nye ya sọftụwia yiri ka ọ dị mma.
Ndị ụlọ ọrụ kwesịrị ire ngwaike na ekele maka ngwanrọ BG ha na-ere, ree ma ree.
Taa, n'agbanyeghị ozi niile dị, ọ dị ka nke a bụ karịa karịa mgbe ọ bụla. Amaara m ndị zụtara nnukwu ngwongwo ngwaike iji rụọ ọrụ dị mfe, dịka ịlele email na ihe ọ bụla. Zingtụnanya.
Ugbu a, anyị gafere isiokwu ahụ na Steve Jobs ... ma biko, n'ikpeazụ, kwuo maka onye nwere nkà na ụzụ, dị ka Dennis Ritchie.
Ọzọ, magburu onwe ya isiokwu! Ekele,
Ọmarịcha ozi, enyi, ọ bụ isiokwu nwere nnukwu mmasị. ọzọ, nwa nkịta na ụlọ ọrụ ya kere naanị ime ka ọnụ ọgụgụ mmadụ daa mbà, n'ihi mgbasa ozi na mgbasa ozi mgbasa ozi, nke mere ka ọ rute ebe ọ nọ, emeela ka a mara. Ka anyi ghara ichefu ndi amamihe dika GARY kildall bu ndi na-ebute uzo ma ndi ha mechiri onu. puppeteer (nne ụgwọ) kpaliri ibe ya, ọ bụ ugbu a ntụgharị nke sọftụwia na - akwụghị ụgwọ nke UBUNTU na - eduzi, nke a na - eji distro eme ihe, ha na - agbanye ikuku ọhụrụ, na - echefughi na mkpali a na - abata na ọtụtụ mgbagha, lekwasịrị anya ìgwè ọ bụla nke ndị mmadụ na nke ahụ na-eme ike ọhụrụ nke dị njikere iweghara ọnọdụ ya n'oge ndị a.
Ọnye na -bụ Ivan Ferrer? dijo
Ezigbo isiokwu. Enwere m mania maka Microsoft na ụzọ o si eme ihe, mana echere m na mmadụ ga-eme ihe n'eziokwu.
Imirikiti ihe ịga nke ọma ha nwere na Windows nwekwara ike ịpụta site na ngwaọrụ ha nyere maka ịmepụta ngwa-ngwa pịa. Malite na kpochapụwo VisualBasic ruo na .NET.
Na ị nwere ike ịmepụta ụdị ọ bụla nke ngwa dị mfe (ma ọ bụ nke ukwuu), ọbụlagodi na njikọ na ọdụ data ma ọ bụ ọrụ weebụ na ịpị oke oke na-esiri m ike imeri. Visual Studio anọwo na ọ bụ ezigbo anụ ọhịa taa. Nke ahụ enyerela ma nyere ọtụtụ ndị aka ịbịaru na-atụghị ụjọ mmemme. M ga-ekwukwa na ọ bụ usoro Google na - eji taa maka gam akporo: ịnye ngwa mmepe ka onye ọ bụla wee nwee ike mepụta opekata mpe maka ngwa ha.
Ghara ikwu banyere Office, yana Access ya (Aghọtaghị m etu onye ọ bụla siri nwee ike mepụta ụdị 'otu-na-otu'), Excel, Okwu, wdg. Ọ bara uru na ha agbanweela obere n'ime afọ iri abụọ, mana ọ bụ na n'oge ahụ ha abụrụlarị ngwaọrụ dị ike, nke ọbụlagodi taa na-abụ ọrụ njikwa nke ọ bụghị obere ụlọ ọrụ pere mpe na ọkara. Na Office ha nwere ihe niile ha chọrọ, DB njikọ, ụdị ntinye, mpempe akwụkwọ ndị metụtara ya, Akụkọ, ozi nzipu ozi na Okwu ejikọtara na tebụl DB, akwụkwọ mgbasa ozi dị oke ike na njikọ ọbụlagodi n'etiti faịlụ dị iche iche, yana ihe ọ bụla dị na mbubata / mbupụ n'etiti ha. Na mgbakwunye ODBC nke na - enye gị ohere ijikọ ihe niile na 'ụwa dị n'èzí', ọ bụghị obere ihe!
Agbalịrị m mmemme Java / JavaFX na Eclipse na Netbeans, eeee, kedu ọgbaghara. Ọ bara uru na ị ga-enweta ọtụtụ ihe na multiplatform, mana enweghị ntụnyere na ịdị mfe nke Visual Studio. Ọbụna na ọrụ HTML / JS (dị mfe, enwere ike) Emechara m iji Visual Studio tupu ọtụtụ IDE ndị ọzọ.
Onye obula nwere nke aka ya, ma n'ezie, m na-ajaja sọftụwia na-akwụghị ụgwọ yana nnukwu ọrụ enweghị mmasị nke obodo (mgbe m nwere ike itinye onyinye m nke ájá 🙂), mana uru nke MS, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ha 'nọ na gburugburu ụwa' enweghị mgbagha. .
Ekwusiri m ike, ọ bụrụ na windo amụbawo nke ukwuu na ọ bụ n'ihi, ee, inwe ya ụtụ na PC niile, kamakwa n'ihi ọtụtụ ngwaọrụ ha nyere (na-akwụkarị, ee) ka mmadụ wee nwee ike iji ya. Ma ọfụma, enwere Visual Studio Express ma ọ bụ Community, ha abụọ bụ n'efu.
Na-ekwu okwu banyere OS, agbalịrị m ọtụtụ Linux distros na hey, dị ka Java, ọgbaghara. Na na na, a ga-enwe (ikekwe n'ebumnuche) ụkọ nke azụmahịa ọkwọ ụgbọala, wdg, ma ugbu a, m na-eche ọtụtụ ihe aga-eme nwere ike ịdị mfe ime. Na Linux ị tufuo nke console esisịt ini ke wụnye ya. Kedu nke dị na Windows ọtụtụ ndị ọrụ amaghịdị ihe cmd bụ.
Taa, na oge Internetntanetị na 'ihe niile na-enweghị n'efu', Linux nwere ike ịpịpụta nnukwu ndị nrụpụta siri ike site na ọnụ ọgụgụ na-arịwanye elu nke ndị ọrụ, na anyị ga-ahụ ma ha nye ndị ọkwọ ụgbọala. Mana nke ahụ kwuru, ruo mgbe enwere ngwaọrụ mmepe dabara adaba maka ndị niile na-ege ntị, ana m atụ ụjọ na Linux / Java ka ga-adọta onye ọrụ ma ọ bụ onye ọrụ oge ụfọdụ.
Na-etinye oge karịa ịwụnye, hazie na idozi ndabere karịa ịmepụta ma ọ bụ imepụta, nke ahụ na-ewepụkwa ibu gị tupu ị bido.
N'aka nke ọzọ m na-akatọ dị ka nke kachasị, ee, usoro azụmaahịa akụkọ ihe mere eme nke M $. Ọ bụrụ na ọ dịịrị ha, taa a ga-akwụ ụgwọ ịntanetị kwa ịpị, ejiri m n'aka.
Ekele na ekele maka ịkekọrịta post ahụ.
Zaghachi Ivan Ferrer
Ubuntu: Uche m gbasara nkesa a
FlatPress: CMS kachasị ọsọ, dị mfe ma dị mfe ị ga-ahụ